Mandela, Mondela, Randela
And now, introducing Mandela banknote, Mandela condoms coming
Nxt time when you go to the doctor he'll tel you suffering
from Mandela virus.What's next????
Next year the days of the week will be Mondela, Tuesdela, Wednesdiba, Thursdiba, Fritata, Sartertata, Suninhlahla...
South Africa soon to be SouthTataMadiba.
Agh f*tsek mahn I'm leaving this country!! How much is a taxi to
mandela tata madiba
Buri pa ceiling
Vana nekushereketa vakaboora buri pa ceiling ravakashandisa pakubuda mumba mavakange vakiirwa. Unfortunately vabereki vava vaive vanhu vapfupi. Vakange vasina mari yekugadzirisa ceiling.
Mai mwana ini ndichakwira pamusoro pako kuti ndikwanise kusvikira paburi iri kuti tiri gadzire. Mai mwana vakabva vamira baba ndokubva vakwira pamapendekete avo kuti vasvikire ceiling.
Vana vakabva vanzi endai munotambira mumba pakabva pasvika vaenzi vakatambirwa nevana panze. "ko baba varipi ?"
Vana vakapindura vachiti "baba vari mubedroom pamusoro paamai vari kunama paburi patakabuda napo."
Vaenzi nenyadzi vakabva vatora mabhegi avo vachibva vaenda.
ceiling buri bhedhuru vaenzi
mbavha adult zvituko kusviba
Chimuregererai, ndamu bamura musoro
Pane imwe mbavha yakange yaba hembe kumaflats ekumagaga kwa coffe man. Vanhu vakatanga kuidzingirira, iyo ikati zano, ndokubva yamhanyira kwamukwisi ndokupinda mumvura.vanhu vakatanga kukanda matombo murwizi imomo. Mbavha yakabva yabvisa bhurugwa ndousimudza magaro mudemga. Vamwe blazo vaiva mberi ndokutanga kuimba vachiti: "chimuregererai, ndamu tsemura musoro"
mbavha kumaflats mkuvisi rwizi
Zimbo in Hollywood
Pane muface akaenda kuStates kuya kunonzi kuHollywood. Saka muface uyu
angaapreswa neweti. Muface akamanya kuchimbuzi ndokubva asvika
akazama kuita open door rikaramba.(occupied)
hollywood toilet gents varume zimbo